music aqoonsan barnaamijyadooda si ay u aqoonsadaan music
Top 10 Music Aqoonsadaan Apps in Aqoonso Music
Ever maqlay hees wanaagsan laakiin aan go'aan ka gaari kara oo artist yahay ama xitaa horyaalka song si kale oo aad u tegi kartaa fiiriya, waayo? Tani waxay noqon kartaa qiray ah diiqayo, gaar ahaan anigoo eegaya tirada songs la sii daayay maalin kasta in aad kaliya la up. Waa hagaag, warka wanaagsan waa in ay jiraan tiro ka mid ah music aqoonsiga codsiga labada iPhone iyo Android in aad ku tashan karaan. Halkan waxaan ku wada hadlaan oo ah tobanka ugu sareeya.
Qaybta I.Top 10 music aqoonsan barnaamijyadooda si ay u aqoonsadaan music
Qaybta II.How in la aqoonsado music isticmaalaya MusicID la Lyrics
Part I: Top 10 music aqoonsan barnaamijyadooda si ay u aqoonsadaan music
1. Shazam Encore
comments on codsigan;
"Waxaan isticmaali app this ku dhawaad ​​maalin kasta oo waan jeclahay."
"app Tani waa sixir ah, app Tani waa run ahaantii sax ah in aqoonsiga song."
Best u music classical
Easy in ay isticmaalaan user interface
App wuxuu yahay in Android heli karo. Waxaa lagu qiimeeyaa 3.5, sidaa darteed derajada dhexe.
Faa'iidada: waa madadaalo iyo interface user mashquuliya, taageertaa classical music iyo qalabka casriga ah ugu. Si kastaba ha ahaatee, ay
khasaaraha, ay timaado lacag, ma awood degsado gabaygii iyo share shabakad bulsho mar dambe waa la heli karaa.
Waxaad app ka link this kala soo bixi kartaa, http://appcrawlr.com/android/shazam-encore
2. MusicID la Lyrics
Kartida in la abuuro xasuus ay ku daray note ama goobta aad ID ee
Heeso Download on Lugood
View fanaaniinta pages la sawiro hodan, taariikh nololeedyadii, releases ka weyn oo ugu caansan
Dhegayso Falanqeynta song
Rating ee app waa 3.5, taas oo soo jeedinaya in kaalinta ugu fiican ka badan celceliska. Waxa ay taageertaa macruufka.
Faa'iidada: awood u leh inay la wadaagto ku shabakadaha bulshada, ka akhriso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan gabaygii, daawan videos music YouTube iyo riwaayada iyo awoodda in la ogaado music cusub ka talooyin songs la mid ah.
khasaaraha, waxaa mararka qaarkood ku guuldareysto in la ogaado songs dambeeyay.
Waxaad codsigan ka URL ka soo dejisan kartaa: https://itunes.apple.com/us/app/musicid-with-lyrics/id320029865?mt=8&uo=4&at=10l4CB
3. Sound Socodka
Qaar ka mid ah faallada on app waxaa ka mid ah;
Great in la ogaado saaxiibo cusub iyo music cusub.
Mashkalada kaliyi waa Services Location ma shaqeeyaan 3GS
Tani waa daahfurka music jecel yahay / la wadaago app
Features waxaa ka mid ah
Qaybsiga Instant ku shabakadaha bulshada
Kartida aad u ducaystaaye heesahaaga saaxiibo, ubaxa, taageerayaasha isticmaalaya feature gabaygii magac-tagging
Si toos ah aad u hesho profile music bulshada gaar ah ugu http://soundtracking.com/yourname
Rating ee app waa 4.5, taas oo soo jeedinaya in kaalinta ugu sareysa marka loo eego codsiyada la mid ah. Waxa ay taageertaa Android.
Faa'iidooyinka la isticmaalayo app tani waa ay aqoonsi dhakhso ah hees iyo raadinta, awoodda ay u dhegayso raadiyaha iyo in ay tahay lacag la'aan.
khasaaraha: in uu leeyahay xulashada kala duwan music iyo music Christian laga yaabaa in ay adag tahay in la aqoonsado.
Waxaad kala soo bixi kartaa codsiga ka URL ah, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schematiclabs.soundtracking
4. Musixmatch music lyrics &
Qaar ka mid ah faallada app ka users waa sida soo socota;
Waqti dheer App ah in isbedel aad waayo-aragnimo music ka dib.
Waxay u eg tahay isagoo mashiin karaoke mobile in aad jeebka.
Waxaa jira qaar ka mid ah lyrics waayay Hindi iyo Punjabi song.
Just music ah app ugu wanaagsan ee lagu iibiyo suuqa hubaal talineyso in ay saaxiibo n qoyska.
Kartida in ay ka saarto vocals song iyo heesta kula qaado
Tuur music lyrics iyo in aad TV la Chromecast
Taageerada in Android Wear (xitaa scrobbling ka Google Play Music iyo Spotify)
Faa'iidooyinka la isticmaalayo app this waa in uu yahay mid lacag la'aan ah, mid si fudud loo raadin kartaa erayada music la isticmaalayo, magacyada artist ama horyaal song oo xitaa waxa uu raad dhawaaqa.
khasaaraha waa in inkasta oo ay lacag la'aan ah, waxa ay leedahay in-app iibsadaan dadka isticmaala android.
Waxaad kala soo bixi kartaa codsiga ka URL ah, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musixmatch.android.lyrify
Qaar ka mid ah comments ka users waa sida soo socota;
FAV codsiga abid
App Tani waxay ka shaqaysaa si aad u wanaagsan u / dhegeyste indhoole aragga.
Tani waa app ugu fiican ee aan ogaaday in ay baadhaan music cusub
Waxa aanu aad u badan ayaa heeso iyo lyrics u caddaalad ah.
Taageero luqado kala duwan
Aqoonsado song marka aad ku hadasho, waxa uu
App waa la heli karo telefoonada macruufka, Android iyo daaqadaha. Waxaa lagu qiimeeyaa 3.3, sidaa darteed derajada celcelis ahaan.
Faa'iidada: taageerada ah ee aragga, waa lacag la'aan, ku siinayaa lyrics song, xiisaha iyo dhererka videos buuxa.
Waxaad kala soo bixi kartaa app ka URL ah, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melodis.midomiMusicIdentifier.hound
6. Digimarc Baro
Aqoonsanaya song kasta waan isku deyey.
Baado markii Great.
App waxtar leh Good.
Nasiib darro waa inuusan marna bilaabi kartaa ciyaaro video ah.
Badbaadinta user interface Time
App waa la heli karo telefoonada macruufka, Android iyo daaqadaha. Waxaa lagu qiimeeyaa 2.2, sidaa darteed hoos ku sar
Faa'iidooyinka, waayo, waa lacag la'aan. Si kastaba ha ahaatee, weli waa ka yar yahay maturity halkan ka muuqaalada qaar waxaa laga yaabaa in clinches.
Waxaad app ka URL ka bixi kartaa, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digimarc.corvallis
7. TuneWiki - Lyrics for Music
Waxaan jeclahay barnaamijkan - gaar ahaan sida bandhigay lyrics.
Media player Best abid marnaba wax dhibaato ah u leh.
Waan jeclahay maxaa yeelay waxa ay muujinaysaa lyrics.
Si wanaagsan ayaan u leeyihiin in ay gasho mar kasta waa gumaarka ah.
Tayada codka Good
Dhegayso music kasta oo la lyrics boggan
Faa'iidooyinka, waayo, waa lacag la'aan iyo taageerada farshaxanka lyric. Si kastaba ha ahaatee, waxaa mararka qaarkood ay saameeyeen cayayaanka halkan ka muuqaalada qaar ka mid ah laga yaabaa in aan si fiican u shaqeeyaan.
Waxaad kala soo bixi kartaa codsiga ka URL ah, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tunewiki.lyricplayer.android
Melody 8. Piano
Qaar ka mid ah faallada on app waxa ay kala yihiin sidan soo socota;
Waxaan bilaabay casharada biyaano oo run ahaantii waxaan taas ku raaxaystaan.
Oo anigu waxaan jeclahay sida app this bara aad u ciyaaro music cusub.
Waa dajinta waa si dhakhso ah oo waxaan ku tababaran kartaa waxa on.
Feature Piano in aad bari kartaa sida loo ciyaaro heeso cusub
Aadka configurable piano (multitouch, glissando, muujinayo, sumadaha note)
Rating ee app waa 4.2, taas oo soo jeedinaya in kaalinta ugu sareysa marka loo eego codsiyada la mid ah. Waxa ay taageertaa Android.
Faa'iidada: piano feature isku kaa caawinaya in aad ku baran biyaano. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu leeyahay liis kooban oo heesaha la heli karo si waxaa laga yaabaa in aysan u aqoonsan songs dambeeyay.
9. Sound Search for Google Play
Comments on app ah;
Tani waa tan app ee aqoonsi song Best abid
Wixii la ekaan Song Aqoonsiga.
Laakiin waxa ay iga careysiisaa waa la waayay Google Music is-dhexgalka.
Dhexgeliyey Google Play, si aad u aqoonsan kartaa hees iyo ku iibsadaan
Nidaameed guud ahaan qalabka
Widget shaashadda aad xiran
Rating ee app waa 3.6, taas oo soo jeedinaya in kaalinta ugu celcelis ahaan marka loo eego codsiyada la mid ah. Waxa ay taageertaa Android.
Faa'iidada: waa fududahay in la isticmaalo user interface, oo lacag la'aan ah oo ay is-dhexgalka leh Google Play. Si kastaba ha ahaatee, waxaad la wadaagin karaa shabakadaha bulshada.
Waxaad app ka URL ka bixi kartaa, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.ears
10. Lyric Search for Pandora
Qaar ka mid ah faallada on app this;
"Sida ugu fiican in la ogaado music cusub oo aad dhegaysato ugu cadcad."
"Fast oo ajiibaa sidoo kale."
"Waxaan qiimeyn sare, maxaa yeelay waa mid ka mid ah barnaamijyadooda aan aadka u isticmaalno."
Rating ee app waa 4.6, taas oo soo jeedinaya in kaalinta ugu sareysa marka loo eego codsiyada la mid ah. Waxa ay taageertaa iPhone iyo iPad.
Faa'iidada: awood u leh inay muusiko dhegayso, raadiyaha iyo xitaa wadaagaan music. Si kastaba ha ahaatee, u yimid lacag dhan $2.99
Waxaad app ka URL ka bixi kartaa, https://itunes.apple.com/us/app/lyric-search-for-pandora/id638666382?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Qaybta II: Sida loo aqoonsado music isticmaalaya MusicID la Lyrics
1. Download app iyo rakibi in aad telefoon
2. Waxaa Launch
3. Press 'Aqoonso Song', hay phone ilaa music ah
Markaas MusicID muujin doonaa infor song la fursadaha si ay u iibsadaan on Lugood ama daawado ee Youtube
> Resource > Music > Top 10 Music Aqoonsadaan Apps in Aqoonso Music